China agịga ala biar emepụta na suppliers | Xinri
● agịga ala amị nwere nnukwu amị ikike
A-● obere esemokwu ọnụọgụ, nnyefe nnyefe dị elu
Capacity Nnukwu ikike ibu ibu
● Ngalaba pere mpe
A-size Nkebi nke dayameta na ikike ibu bụ otu dịka ụdị biarin ndị ọzọ, na mpụta nke pere mpe bụ nke pere mpe
Mkpa ala agba biarin bụ biarin na cylindrical rollers ndị bụ obere na dayameta ikwu na ha ogologo. Ihe profaịlụ gbanwere / ọsọ ọsọ gbanwere na-egbochi nrụgide nrụgide iji gbasaa ibu ọrụ ndụ.
XRL na-enye ihe nkedo nkedo agịga n'ọtụtụ dị iche iche, usoro na n'ọtụtụ nha, nke na-eme ka ha dabara adaba maka ọtụtụ ọnọdụ ọrụ yana ngwa.
1. agịga ala amị bụ kọmpat na Ọdịdị, obere na-aba na elu na adiana ziri ezi, na ike ibu a ụfọdụ axial ibu mgbe ebu a elu radial ibu. Thedị usoro ihe eji emepụta ihe dị iche iche, ime mgbanwe ọ bụla, dị mfe ịwụnye.
2. The jikọtara agịga ala amị mejupụtara centriole agịga ala na inupụ zuru bọl, ma ọ bụ na-atụgharị bọl, ma ọ bụ inupụ cylindrical ala, ma ọ bụ angular kọntaktị obi ụtọ, na ike ibu unidirectional ma ọ bụ bidirectional axial ibu. Enwere ike ịhazi ya dịka usoro ihe owuwu pụrụ iche nke ndị ọrụ chọrọ.
3. The jikọtara agịga ala amị na-eji na amị raceway ebe kenha aro e mere, nke nwere ụfọdụ chọrọ na ekweghị ekwe nke agba.
A na-ejikarị ya eme ihe na igwe ihe eji arụ ọrụ, igwe eji arụ ọrụ, igwe akwa na igwe obibi akwụkwọ yana ngwa ọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịme usoro sistemụ igwe kọmpụta karịa.
Nke gara aga: Nwee Ntuchi Bọọlụ
Osote: Cylindrical ala agba
ọla ihe onwunwe agịga agba
factory ọkọnọ agịga biarin
germany nke anụ ọhịa ahụ nke nwere agịga na-ebu ala
anụ ọhịa dọọrọ cup agịga ala amị
agịga ala amị
agịga ala biarin ígwè onu
Agịga ala Atiya biarin